दिल्ली दूतावासका मन रुने दुर्दशा « Jana Aastha News Online
दिल्ली दूतावासका मन रुने दुर्दशा
प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७४, आईतवार १८:२८
अर्थविद् तथा लामो समयसम्म राष्ट्र बैंकमा बोर्ड सदस्य विश्वम्भर प्याकुरेल के देखेर हो कुन्नि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानु एक हप्ताअगाडि श्रीलंकाको राजदूत नियुक्त भएर कोलम्बो पुगे । तर, त्यहाँ नेपाली दूतावास बसेको घर भत्काउने क्रम चल्दै रहेछ । हाम्रो दूतावासले भाडामा लिएको घर दुई दाजुभाइको आधा–आधा रहेछ । उनीहरुबीच अंशबण्डा भएपछि भाइचाहिँले आफ्नो भागमा परेको भवन भत्काएछ । दाजुले पनि आधा भत्केको घर त्यत्तिकै राख्ने कुरा भएन ।
त्यसैले भन्न थालेछन्, ‘म यो घर पूरै भत्काएर अर्को बनाउँछु । अब तिमीहरु अर्कै घर खोजेर सरिहाल ।’ यस्तो अवस्था आएर दूतावास नै विचल्ली भएको बेला कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका प्राध्यापकको मन मर्ने नै भयो । त्यसैले राष्ट्रपतिको भ्रमण सकिएलगत्तै स्वदेश फर्किएका छन् । अहिले त्यहाँको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्दै दौडिरहेका छन् । उनको माग छ, बजेट बढाइदिनुप¥यो नत्र मलाई जान मन छैन । हुन पनि यो दूतावास अति नै लो प्रोफाइलमा रहेछ । बजेट छैन । राजदूतसहित जम्मा तीनजना कर्मचारी– एक अधिकृत र एक नासु । त्यो घर अर्जुनकान्त मैनाली कार्यवाहकको हैसियतमा कार्यरत रहेका बेला खोजिएको हो । त्यसपछि नीलाम्बर आचार्य, बलबहादुर कुँवर, दुर्गा भट्टराई, सुशील अमात्यले कमाण्ड सम्हालिसकेका छन् । नारद वाग्लेलाई केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो तर उनी त्यता लाग्न नपाउँदै प्रचण्ड सरकारले निर्णय फिर्ता लिएर अहिले प्याकुरेललाई पठाइएको हो ।
अरुतिर पनि लफडा कम छैन । दिल्लीका सेकेण्डम्यान कृष्ण ढकाललाई फिर्ता बोलाइएको छ । तर, उनी ‘म पत्र बुझ्दिन, मरिगए फिर्ता जान्न’ भन्दै अड्डी कसेर बसेका छन् । यिनले एकदिन स्टाफ मिटिङमा राजदूतले पहिल्यै अह्राएको काम ‘के भो ?’ भनेर सोधे । ढकालले पुरानै तरिकाले एउटा बहाना निकाले र काम नभएको जनाऊ दिए । राजदूतले स्वाभाविक असन्तुष्टि पोखे, ‘के हो ढकालजी, तपाईं जहिले पनि एक–एकवटा बहाना बनाउनुहुन्छ । काम कहिल्यै गर्नुहुन्न ।’ उनले त्यति भन्न नभ्याउँदै ढकाल पड्किए, ‘मलाई यहाँ गाली गर्न बोलाएको ? लाज लाग्दैन तपाईंलाई ? पदभार ग्रहण गर्न पाएको छैन, आफूचाहिँ यताउता जाने को हो ?’ कात्तिक २८ गते दिल्ली गएर मंसिर १ गते दीपकुमार उपाध्यायले पदभार ग्रहण गर्नुअघि दुई दिन पुराना चिनजानका मान्छे भेटेकोमा समेत ढकालले यसरी डाँटेका हुन् ।
त्यसपछि मौन बसेका उपाध्यायले के बुझे भने यी मान्छेबाट काम चल्दैन । त्यति मात्र होइन, उनले यो पनि थाहा पाए कि केपी ओली सरकारका बेला चाहिँदो÷नचाहिँदो पोल लगाएर फिर्ता बोलाउन लगाउनमा यिनैको ठूलो हात छ । त्यसैले परराष्ट्रमा पार्टी र गुटसमेत मिल्ने मन्त्री भएका कारण ढकाललाई फिर्ता बोलाउनू भन्दै उजुर हाले । पहिलोपटक उपाध्याय दिल्लीमा हुँदा कुनै विदेश मन्त्रालयको सहसचिव भेट्न गयो भने पनि ‘लसरकार ढाल्न लबिङ गर्न गयो’ भन्दै केपीनिकट निरुपाल, केशव बडालमार्फत पोल लगाउँदा रहेछन् । उनको सोचचाहिँ के रहेछ भने यदि उपाध्याय फिर्ता भए भने संक्रमणकालमा नयाँ राजदूत नियुक्तिमा कुरा मिल्दैन अनि आफूले कार्यवाहक भएर ढुक्कै चलाउन पाइन्छ । ढकाल कतिसम्म माहिर भने वचन अति चिप्लो तर भित्र कोढी प्रवृत्ति । तलबाट आएका फाइलहरु सबै आफैंकहाँ अड्काएर राखिदिने ।
यदि अगाडि बढाउनैप¥यो भने टिप्पणीमा ‘महामहिम राजदूतज्यू, यसमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित शाखाको राय लिई उपयुक्त निर्णय हुन पेश गर्दछु’ जस्ता अति नै अस्पष्ट र काइते भाषा लेख्ने । ठहर खण्डमा के गर्नुपर्ने हो त्यो उल्लेख गरेर सदरका लागि पो पेश गर्नुपर्ने तर त्यस्तो कहिल्यै नगर्ने । उनको यस्तै तरिकाले गर्दा अढाइ वर्षअगाडि नेपालमा सार्क सम्मेलन हुँदा भिआइपी चढ्ने गाडी ल्याउन समस्या परेको थियो । यताबाट खगनाथ अधिकारी आफैं गएर प्रक्रिया पूरा गरी गाडी ल्याएको तथ्य छँदैछ । कुनै पनि निर्णयका काम नगर्ने तर सुविधा पनि केही नछाड्ने बानीले गर्दा दूतावासका सबै उनीबाट आजित भइसकेका छन् । उपसचिव हरि ओडारीसँग कुर्सी हानाहानको तहसम्म पुगेर झगडा गर्ने पनि उनै । तलबाट आएका फाइल आफूले अड्काएर राख्ने अनि कोही सीधै राजदूतसम्म पुग्यो भने मलाई किन बाइपास ग¥यौ भन्दै निहुँ खोज्ने । बिपी कोइराला फाउण्डेसन र दूतावासको पैसामा हप्ताको अन्तिम दिन पारेर कसैलाई नभी भारतका विभिन्न शहर घुम्ने र अन्तिममा पाँचतारे होटलको बिल पेश गर्ने, यिनका अनेकौं हर्कतबाट पीडित रहेछ हाम्रो दूतावास ।
मान्छे कतिसम्म कपटी भने यदि नेपालबाट मन्त्री वा कोही भिआइपी जाने भयो भने जम्मा त्यहाँ पाइने तीनवटा पासमध्ये एउटा सधैं आफ्नो नाममा जारी गर्न लगाउने । तर, स्वागत गर्न विमानस्थलचाहिँ नजाने । यता राजदूत सेकेण्डम्यान गइहाले भनेर ढुक्क बस्ने, उता ढकालले साना कर्मचारी पठाउने । पछि भिआइपीहरुलाई भने ‘राजदूतले हजुरहरुको इज्जत नराखेर के ग¥या हो, बुझ्नै सकिएन भन्दै उकास्ने, चाकडी गर्ने ।’ यस्तै तरिकाले बिना महत र आरजु देउवाको समेत मन जित्न भ्याएका रहेछन् उनले । अहिले मन्त्रीसँग आरजु र बिना बन्दैछन्, ‘होइन, मान्छे त ठीक रहेछ त । अनि किन काम नदिएको राजदूतले ?’